ဦးဇော်: သီတဂူဆရာတော်ဟောတဲ့ စစ်သား အကြောင်း
သီတဂူဆရာတော်ဟောတဲ့ စစ်သား အကြောင်း
ငါဘာယူသွားမလဲ၊ အားလုံးမေးကြပါ။ ငါတိုင်းပြည်၊ ငါ့သာသနာ၊ ငါ့လူမျိုးအတွက် ငါဘာတွေထားခဲ့မလဲ။ အဲဒီမေးခွန်းနှစ်ခု နာနာမေးပြီးတော့ အဖြေမှန်ထွက်အောင် ကြိုးစားကြစမ်းပါ။
လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်ကြတဲ့-လူတွေအားလုံး၊ အထူးသဖြင့်တော့ အသက်စွန့်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ။ နော်-အသက်စွန့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘုန်းကြီးတို့က-ဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘုရားလောင်းတွေလို ဘုန်းကြီးက ကြည်ညိုတယ်။ လေးသင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်း ဘုရားလောင်းကျင့်စဉ်တွေကို ကြည့်ကြည့်၊ သူတစ်ပါးရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘုရားအလောင်းဘာလုပ်လဲ၊ အသက်စွန့်တာတွေ အများကြီးပဲ။
အားလုံးပရိတ်သတ်-မေးမယ်၊ စွန့်ခြင်းကြီး ဘယ်နှပါးလဲ။
တစ်-က ၊ `ဓနပရိစာဂ´သူတစ်ပါးရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ငါ့ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးချင်တိုင်းဆုံးရှုံးပစေ-ဒီလိုမဟုတ်လား၊ ဘုရားလောင်းစိတ်ဓါတ်မွေးရမယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘာလဲ၊ `ဓနပရိစာဂ´ပြီးရင် `ဘယိယပရိစာဂ´ဆိုကြပါစို့။ `ဘရိယပရိစာဂ´မယားစွန့်တာ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေတဲ့၊ တပ်မတော်သားတွေ၊ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သူတို့က ဟိုမှာတိုက်ပွဲစွန့်နေတုန်း ဒီကအမျိုးသမီးက တစ်ခါတစ်ခါ ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။ စွန့်လိုက်ရတာတွေ၊ ပြန်လာတော့ - ဟယ် - ဆို၊ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အသက်စွန့်သွားတယ်၊ ဒီကအမျိုးသမီး၊ မုဆိုးမဖြစ် ကျန်ရစ်တာတွေ။ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလည်း အသက်စွန့်ပြီးတော့ ဒီလိုပဲလုပ်ကြရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးက အရမ်းကြည်ညိုတယ်။ သြော်-နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တပ်မတော်သားတွေဟာ ဘာလဲ။ ဘုရားလောင်းတွေ၊ ဘုရားအလောင်းကျင့်စဉ်ပဲ။
(၁) . . . စီးပွားဥစ္စာလည်း စွန့်လွှတ်ရတယ်။ (၂) . . . သားသမီးလည်း စွန့်လွှတ်ရတယ်။ (၃)-သားမယားလည်း စွန့်လွှတ်ရတယ်။ (၄) . . . အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း၊ ခြေထောက်တွေပြတ်. . .။ လက်တွေပြတ် . . . ။ မျက်လုံးတွေကန်း . . . ။ ဘာတွေလဲ- `အင်္ဂပရိစာဂ´။
နောက်ဆုံး (၅) အသက်စွန့်တယ်။အဲဒါကြောင့် ဘ၀မှာ-
ကောင်းကောင်းထားပစ်ခဲ့နိုင်အောင်၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း ကောင်းတာလေးတွေယူသွားနိုင်အောင် အားလုံးကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခြေထောက်တွေပြတ်လို့၊ လက်တွေပြတ်လို့၊ မျက်လုံးတွေကန်းလို့၊ နိုင်ငံတော်အတွက် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူမှုရေး ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နိုင်ငံမှာ အများကြီး။ အားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဘုန်းကြီးက ဒီကနေ့ ဂုဏ်ပြုတယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ်။ သြော်-ဘုရားလောင်းစိတ်ဓါတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတာ . . . ။ ဒီအတိုင်းလည်း ဆက်လုပ်ကြ။
သတင်းချစ်သူ-ဝေဟင် မှ သိသမျှ ။
Posted by ဦးဇော် (သိသမျှ) at 01:53